स्वास्थ Archives - Page 19 of 22 - Dna Nepal
डा. केसीको पक्राउमा प्रधानमन्त्रीको आक्रोश २५ पुष २०७४, मंगलवार ०२:२२
काठमाण्डौं, पुस २५ । डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टी देखाएका छन् । प्रहरीले आफूलाई थाहै नदिई डा. केसीलाई गिरफ्तार गरेको उनको गुनासो छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै नदिई डा. केसीलाई पक्राऊ..
मोटरसाइकल दुर्घटनामा प्याराग्लाईडिङ पाईलटको मृत्यु २४ पुष २०७४, सोमबार १६:०७
पोखरा, पुस २४ । पोखराको न्युरोडमा मोटरसाइकल दुर्घटन हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । ग ११ प ७६८१ नम्बरको मोटरसाइकल सोलार बत्तीको पोलमा ठोक्किँदा पोखराका प्याराग्लाइडिङ पाइलट सन्दीप सिग्देलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । तनहूँ घर भइ हाल पोखरा..
पक्राउ परे डा गोविन्द केसी
काठमाण्डौं, पुस २४ । डा. गोविन्द केसी पक्राउ परेका छन् । अदालतको अपहेलना मुद्दामा उनी सोमबार पक्राउ परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा प्रहरीले उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई पक्राउपछि महानगरीय..
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै डा. केसी पुनः अनसन बस्दै
काठमाण्डौ, पुस २४ गते । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा.गोबिन्द केसीले आजदेखि १४ औं पटक अनसन सुरु गर्दैछन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको ईजलासले बर्खास्तीमा परेका डीन डा.शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश..
बागलुङको खर्वाङमा माटरसाईकल दुर्घटना, एकजना गम्भीर २२ पुष २०७४, शनिबार १३:४२
बागलुङ, पुस २२ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ बुर्तिवाङ सडक खण्ड अन्तर्गत बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर २ राक्सेमा माटरसाईकल पल्टिँदा एकजना घाईते भएका छन् । घाईतेको अवस्था गम्भीर छ । ध १ प ३१०७ नम्बरको मोटरसाइकल सडकबाट उछिट्टिएर तल खस्दा ढोरपाटन..
धामीको भर पर्दा भाइरल ज्वरोबाट चारको मृत्यु, तीनसय बढी विरामी
जाजरकोट, पुस २२ । एक सातादेखि फैलिएको रुघाखोकी र भाइरल ज्वरोबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ । रुघाखोकीले केही दिनदेखि थलिएका जुनीचाँदे गाउँपालिका– २ मजकोटकी ६५ वर्षीया धनसरा नाथ, ७५ वर्षीय सतरुप शाही र ६२ वर्षीया आइती तिरुवाको मृत्यु भएको..
२५ वर्षको भ्रुण पछि बच्चा १९ पुष २०७४, बुधबार ०५:४९
दी एटलान्टिक विश्व खबर, पुस १९। ‘भ्रूण’ भनेको मान्छे लगायत स्तनधारी प्राणीको प्रारम्भिक अवस्था हो। मानव जातिमा भ्रूणले तीन महिना पार गरेपछि गर्भावस्थाको रूप लिन्छ। र, सामान्यतया ९ महिनापछि त्यही भ्रूण बच्चाको रूपमा जन्मिन्छ। अमेरिकामा भने..
कफी पिउनुका यस्ता फाइदा र बेफाइदा १८ पुष २०७४, मंगलवार ०८:०६
कफी हामीले दिनहुँ सेवन गर्ने पेय पदार्थ हो। जाडो याममा हामीले कफी अलि बढी नै पिउनेगर्छौं। हामी कसैको घरमा पाउन बनेर गयौं भने, सुरुमै सोधिन्छ, चिया पिउने कि कफी? कफीमा ‘क्याफिन’ हुन्छ। क्याफिन धेरै भयो भने शरीरलाई बेफाइदा गर्छ भने ठिक्क..
पोखरामा नयाँ नियम आउँदै, चटपट बेच्न नपाईने ११ पुष २०७४, मंगलवार १३:४३
पोखरा, पुस ११ । पोखरा लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले चटपट र पानीपुरीले महिला र बाल स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गरेको भन्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको बताएका छन् । उनले पोखराका सडक पेटिमा विक्रिका लागि राखिएका चटपट र पानीपुरी खानका..
नर्भिकले भन्यो–आकस्मिक ह्रदयघाटबाटै प्रकाशको निधन ३ मंसिर २०७४, आईतवार ०७:१८
काठमाडौं, मंसिर ३ । नर्भिक अस्पतालले प्रकाश दाहालको निधन भएको घोषणा गरेको छ । आज बिहान घरमै अचेत अवस्थामा भेटिएका प्रकाशलाई ५ बजेर ५० मिनेटमा नर्भिक अस्पताल पुर्याइएको थियो । उनको आकस्मिक ह्रदयघाटबाट निधन भएको अस्पतालले सार्वजनिक गरेको छ ।..